Ukuzizwa - kuyinqubo kanye isimo
Ukuzizwa - uyithuluzi okuqonda womuntu yena wonke. Zonke izidalwa eziphilayo babe nekhono lokuqonda izenzakalo ezihlukahlukene. Nokho, ukuqaphela ke, ukucacisa uhlobo imizwa yakhe futhi uthi nje indoda can ngazo. Uyini umqondo welithi "bazizwa"? Ziyini izigaba yomsuka wawo, futhi yini yohlobo lwazo isehlane kwengqondo? Konke lokhu, kuzoxoxwa ngakho kamuva.
Ngakho, umuzwa - kuyinto evamile inqubo ezingokwengqondo, okungukufa (equlekile noma bayazi) umkhiqizo we isimiso sezinzwa esiyinhloko, okuzovela bedle ezishukumisa (zangaphakathi nezangaphandle).
Njengoba inqubo wemvelo, zingachazwa ngezinqubo ukuzwela umzimba okuthinta amathonya kwemvelo. Esebenzisa ezihlukahlukene umuntu ezenza ubona ulwazi mayelana nesimo sakhe ikhaya, kanye nezwe elingaphandle.
Ngaphezu kwalokho, umuzwa - kungcono inqubo bokuphila lapho receptor kuphakamisa ukucasuka Izinzwa amaza. Lesi sakamuva, esikhundleni salokho, idluliselwa ku ezindaweni ezifanele ebuchosheni, lapho ukwamukela ukuhlaziya impendulo umfutho.
Uhlelo ngezigaba of emizweni kwengqondo siqukethe amaqembu amathathu: proprioceptive, exteroceptive futhi interoceptive. ukuzwa Proprioceptive ibonisa ukunyakaza komzimba emkhathini zemizwa apharathasi vestibular kanye nemisipha. Exteroceptive uchaza izindawo emhlabeni zangaphandle ngenxa receptor emzimbeni (ukunambitheka, ukuzwa, emehlweni, iphunga, emizweni ethintekayo kanye isikhumba). Ngakho, ukuze uthole ukunambitheka, kudingeka udle okuthile, futhi ukuhlola isihloko - touch ke. Interoceptive kwenzeka ngesikhathi ukukhuthazwa zemizwa izicubu zangaphakathi kanye nezinhlaka futhi ikhuluma ngokuphila isimo sabo.
Futhi, kukhona imizwa bayazi futhi equlekile. Phakathi yangaphambili bayasazi nakho okukhulu ukuthi khombisa amakhono abantu engavamile. Lezi akunakubangelwa, futhi umuzwa Deja Vu - isimo lapho uzizwa ukuthi lesi simo kwenzeke lokhu, kodwa-ke akuhlangene ne isikhashana esithile esikhathini esidlule. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa akuyona into engavamile kubantu, kodwa imbangela yayo akukwazi okwenziwe futhi kwenzeka kakhulu kuyaqabukela. izimbangela zalo ayitholakalanga, kodwa kusikisele ukuthi kwenzeka sibonga umsebenzi ukuthi ingxenye yobuchopho obhekene ukuqonda futhi inkumbulo.
Deja vu ngokuvamile umuzwa okungokoqobo. Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi kwakungase dream nje, kodwa kuyenzeka ukuthi into enjalo kungaba waqonda njengoba isibikezelo esizayo, noma njengendlela inkumbulo "ukuphila esikhathini esidlule." Ngokuvamile, lokhu mkhuba Kunzima ukuchaza, futhi impendulo ejwayelekile umuntu zilandise it nanoma esidlulileko.
Ukuze imizwa equlekile yilezo zenzeka ngesikhathi sokulala, kuyilapho ekwehliseni izinga jikelele ukuqwashisa, kanye umuzwa enembile (umuzwa).
Kulesi sisekelo, singasho ukuthi umuzwa - ngumqondo ethize yehlukene kaningi okubalwa. Lichaza izenzakalo ezenzeka emazingeni ahlukene futhi babe nombono ezahlukene izinga, umfutho (eziya ziba zimbi futhi onokuqundeka) kanye nesikhathi.
Utshani umfelokazi - ubani lo? Umsuka nencazelo phraseologism
I imithetho ethize yokuziphatha kahle kule nkundla
Ukwakhiwa: izivivinyo ekhaya nasemsebenzini
Kwenzakalani ruble eRussia? Sinjani isimo kulo nyaka 2014?
Indlela jam kusukela black currant